Mitsahatra tsy mampiasa Thunderbird hampiasa KMail | Avy amin'ny Linux
Mijanona amin'ny fampiasana Thunderbird hampiasa KMail aho
Izaho dia mpampiasa foana ThunderbirdTena tsy nampiasa mihitsy aho Microsoft Outlook lavitra azy io Outlook Express. evolisiona Nanandrana azy aho nandritra ny fotoana kelikely, ary koa Clawnmail… Saingy tsy tiako ireo roa farany.
ampiasaina Thunderbird satria miaraka amin'ireo add-on izay napetrako, ary indrindra ny lohahevitra / hoditra napetrako tao dia tena manintona izy.
Avy eo dia tonga ny Thunderbird v3 ... ary ny lohahevitro dia tokony hatsahako ny fampiasana azy satria tsy mifanaraka, miaraka amin'ny hoditra ny add-ons, saingy tsy misy na inona na inona ... Nampiasa hoditra hafa aho izay nahita fa soa ihany. Saingy, ny Thunderbird v4 dia nisolo tena an'io olana io ihany ... sy v5, v6, sns sns ... Eo amin'ny v11 isika izao, ary amin'ireo plugins sy hoditra rehetra nampiasako, dia saika tsy misy sisa tavela.
Izany rehetra izany dia nahatonga ahy tsy ho faly tamin'ny Thunderbird, saingy mbola tsy hitako ny solony tonga lafatra ho azy ... mandra-pahatongan'ny fotoana indray dia nanome fotoana aho KMail.
Ny tiana holazaina dia hoe andro vitsivitsy no nampiasako KMail, ary afa-po 99% amin'izany aho 😀
Ohatra, manolotra safidy amiko izy io hanamboarana azy toy ny tsy misy mpanjifa mailaka hafa ... fa hey, ireo izay mampiasa KDE tahaka ny nahazatra antsika tamin'ity zony ity? … TPT!!
Ampiasao koa Akonadi ary hatreto dia tsy misy na inona na inona (fa TSY MISY), mamela alalana fampiharana maro hizara tahiry mitovy ...
Tombony ampiasaiko izao KMail?
Tsy toy ny taloha, izao dia mampiasa client client aho izay Qt, tonga lafatra ho an'ny KDE.
Manana safidy betsaka kokoa aho hampanjifaina azy, ohatra izao, voafehiko bebe kokoa ny fampandrenesana, ny hitsin-dàlana fitendry, sns.
Zavatra tsotra toy ny fanindriana ny bokotra akaiky (ny hazofijaliana eo an-joro) dia TSY manidy ny fampiharana, fa kosa mametraka azy ao anaty lozantsara (tray), amin'ny Thunderbird Mila addon aho ... in KMail tsia, misy ny safidy ao 🙂
Safidy azo hanaovana asan'ny tarika amin'ny IMAP
Encrypt mailaka mampiasa algorithms toy OpenGPG.
Efa nilaza ve aho fa afaka manova tanteraka ny loko rehetra amin'ny fampiharana? … Manaova ny hoditro amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny? ...
Alamino ny mailako avy amin'i etikety/Tags ... toy ny hoe avy amin'ny tranokala namboarina miaraka WordPress izy izay dia ...
Ary satria tsy mety lavorary izy io, misy lafy ratsy ihany Thunderbird:
Fampiasana Akonadi ... toy ny fiankinan-doha rehetra, mety tsy mahazo aina ho an'ny sasany izany, toy ny Akonadi tahirizo ao amin'ny DBs ny angonao MySQL amin'ny alàlan'ny default, na dia azo alamina hampiasaina aza SQL-Lite... Hanadihady momba an'io aho hehe.
En Thunderbird amin'ny fisafidianana mailaka 5 (ohatra) ary tsindrio [Ny] (handefasana azy ireo any amin'ny fako) izay hanamarihana ireo mailaka 5 ireo ho «Efa namaky«, Ary nalefa tany amin'ny fitoeram-pako koa, raha tao KMail alefa any amin'ny fanariam-pako fotsiny izy ireo, ary avy eo dia miseho amiko toa mailaka 5 ao amin'ny fako izy ireo fa tsy vakiana (fantatro fa mety hadalana ny sasany haha)
Ary ny fanontaniana volamena…. Iza no mandany loharano bebe kokoa? ...
Eny ary, KMail mandany ahy 30.8MB RAM, ary Thunderbird 31MB … Ka, mitovy 😀
Mazava tsara, mampiasa aho KDE 4.7.4 (KMail v1.13.7), TSY mampiasa ny kinova farany aho (KDE 4.8.1), Y Thunderbird 11 ... rariny raha mampitaha ny kinova farany an'ny KMail miaraka amin'ny farany an'ny Thunderbird, saingy indrisy fa ao Debian nefa KDE 4.8 Nofinofy lavitra fotsiny izany
Tsy tadidiko izay fanavaozana / fanovana misy kinova ambonimbony kokoa KMail, ka manantena an'izany aho 😀
Iza amin'ireo mpanjifa mailaka no ampiasainao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mijanona amin'ny fampiasana Thunderbird hampiasa KMail aho
Tsy nanana olana tamin'i Kmail mihitsy aho… Tsy dia ampiasaiko firy koa io, satria tsy manana kaonty iray fotsiny aho ary matetika no mijery azy io amin'ny mpizaha. Tsy mbola nanandrana ny mpanjifan'ny Opera aho ary noraisiko ho toerana misy anao. mpitety
Valio i Tavo
Mampiasa ilay tonga tafiditra ao amin'ny Opera aho, mampiasa kmail hanandramako azy, saingy ny fiasa izay entin'i Opera dia ampy, ary tsy haiko raha mitondra mihoatra na latsaky ny kmail izany, total, tsy ampiasaiko mihitsy ny safidy rehetra programa iray. (Mbola mahita fiasa amin'ny kwin aho)
Tsy mbola nampiasa ny an'ny Opera mihitsy aho, saingy tsy tiako ny hevitra hoe miankina amin'ny mpizahatany ny mpanjifan'ny mailaka, aleoko misaraka 😀
Eny, fa raha tokony hanana programa 3 na maromaro misokatra foana ianao, browser, e-mail, mpamaky rss, naoty, ny zava-drehetra dia ao amin'ny Opera izay efa fantatrao fa azo ahenaina ao anaty fitoeram-bolanao.
Eny heveriko fa avy amin'io fomba fijery io dia misy dikany, saingy tiako (zavatra manokana) ny hizara zavatra sy handamina ... ohatra, raha te hijanona tsy hampiasa Opera intsony aho ary hampiasa an'i Rekonq dia tsy afaka, satria miankina amin'ny mailaka Opera ho ahy 🙂
Ny torolàlana ho an'ny kmail sasany dia mety hahaliana, indrindra amin'ny fampiasana gpg na fikirakirana kaonty sasany, tamin'ny voalohany dia niady mafy tamin'ny an'ireo mombamomba ahy aho.
tato ho ato dia nampiasa gpg aho mba hanafina ny rakitra ary hitahiry azy ireo amin'ny rahona (toy ny backup).
Ie, tsy ratsy izany 😀
Ho hitako raha manao guide ao amin'ny KMail hahahaha.
Efa nanandrana am-polony im-betsaka aho, saingy tamin'ny farany dia tsy vitan'ny basim-borona tany amin'ny kianja mitafo i Kmail. Na dia niasa tsara aza indraindray, dia nanjary niadana tampoka. Tonga tamiko ny zava-nitranga fa rehefa nandefa hafatra hamaky azy aho dia 10 segondra mahery vao nosokafana. Amin'ny maha-mpampiasa KDE ahy dia faly aho nanao azy ho mpanjifako lehibe indrindra, saingy miverina any Thunderbird foana aho, avy amin'ny pragmatisme lehibe.
Ary, etsy ankilany, tsy mamela ahy hitantana ny kaonty mailaka 5 miaraka amin'izay aho, amin'ny fomba tsotra. Heveriko fa mbola programa tsara io, saingy tsy mifanaraka amin'ny antenaiko na mifanaraka amin'ny zavatra ilaiko izany.
Eny, hatreto tsy misy olana ... fa raha manomboka hitranga izay lazainao ... uff ... tsy maintsy miverina any amin'ny Thunderbird LOL aho !!
Apetraho ny mifanohitra amiko, ny olana aotra ary ny kinova farany dia milamina kokoa noho ny hatramin'izay.
Hyoga Assure dia hoy izy:
Manaiky tanteraka. Volana vitsivitsy lasa izay dia nanandrana ny Kontact tao amin'ny Kubuntu aho ary mahafaty ny mailaka Kmail, tsy lazaina intsony fa tsy nisy antony mazava, nanjavona ireo fifandraisana fa hatramin'ny andiany farany dia be ny fanatsarana ary milamina kokoa.
Valiny ho an'i Hyoga Assure
Ny olana dia Kubuntu: Tonga tany Arch aho nitady distro izay niasa tsara ny KDE SC ary tsy azo lavina ny tsy fitovizan'ny Kubuntu sy ny Arch + KDE. Kubuntu dia milina mpanamboatra shit, feno lesoka sy bibikely na aiza na aiza no jerenao, mibontsina sy buggy tanteraka, miaraka amin'ny valiny mavesatra, tsy mahazo aina ary miadana KDE ... ao amin'ny Arch, ny KDE dia maivana toy ny LXDE ao amin'ny Ubuntu ary izany koa milamina tokoa, indrindra ny Kmail sy ny suite Kontact iray manontolo (KDE 4.8.4-3).
Mdrvro dia hoy izy:
Salama!! Eny, ho fohy aho. Manana olana amin'ny kmail aho, ataoko tsara ny dingana rehetra mandra-pahazoako ity hafatra manaraka ity:
: Tsy afaka miditra amin'ny mpizara pop.mail.yahoo.com.
Pop.mail.yahoo.com tsy azo nidirana. Mety diso ny teny miafina.
Namaly ny mpizara: "[AUTH] Tsy azo atao ny miditra amin'ity serivisy ity."
Mamaly an'i Mdrvro
Rehefa namaky aho dia tsy avelan'ny Yahoo hampiasa POP. Afaka nanamarina ny Yahoo! ny mpanjifa IM hafa mampiasa POP ve ianao?
Miala tsiny KZKG ^ Gaara fa tara mamaly. Eny, ny lesoka dia noho ny tsy namelana ny safidin'ny mailaka POP tamin'ny safidin'ny mailaka. Soa ihany fa miasa ho ahy amin'ny kmail ary misaotra betsaka anao namaly.
Aza manahy fa manana zavatra hatao daholo isika 🙂
Eny ... Faly aho mahafantatra fa efa voavaha ny olanao
Niteraka olana tamiko io tamin'ny kde 4.8, zavatra tsy natombohan'ny akonadi aho, saingy tsy tadidiko tsara, tamin'ny farany dia nisafidy ny tsy hampiasa client mail amin'ny Linux aho.
Ary hazo inona no navelany taminao? ... tsara tsy manana finiavana ho azy i Akonadi, raha tsy manomboka amin'ny zavatra izy dia haha.
Izany dia toy ny * tsy nahitana ny tahiry data akonadi ary hikatona izany *, rahampitso dia miditra amin'ny chakra aho ary mametraka ny hazo.
Manana activité akonadi anao ve? Ao amin'ity rakitra ity ~ / .config / akonadi / akonadiserverrc dia alao antoka fa milaza ny tsipika
StartServer = marina
Eny, tsy mampiasa mpanjifa mailaka aho, mijery azy mivantana avy amin'ny tranokala ary manana kaonty 8 O.0 mahery aho.
Tiako ny miaraka amiko ny mailako, ka rehefa te hamaky zavatra aho dia tsy miankina amin'ny fananana Internet 🙂
Pop3 sa Imap?
POP3 foana 😀
Andramo ny ivelan'ny mailaka IMAP dia ho gaga ianao 😀
Inona no mampiavaka azy amin'ny POP3? 🙂
Imap offline dia manana ny endri-javatra IMAP rehetra, fa miaraka amin'ny fanamorana ny fanananao ny mailaka eo an-toerana, toy ny POP
Mbola tsy azoko ny fahasamihafana misy eo amin'ny IMAP sy POP3 ^ - ^ U.
Samy misintona ny mailaka amin'ny solosaina izy ireo, inona koa?
lajc0303 dia hoy izy:
Tena mijanona ao amin'ilay thunderbird aho
Valio ny lajc0303
Mampiasa ny mpanjifan'ny Opera aho, tiako kokoa ny manana ny zavatra rehetra ho iray, izay iray tsirairay avy, mazava ho azy, manana ny fetrany ny mpanjifa, saingy mifangaro tsara amin'ny tontolon'ny birao misy azy izy, miasa tsara amin'ny IMAP (GMail, GMX ary MyOpera) , ary manana endrika madio kokoa noho ny thunderbird
Avy amin'ny akonadi u sqlie no nahitako izany tao amin'ny pejy fanampiana kde
Maninona raha mampiasa sqlite?
Nanandrana izahay. Tena. Tsy tantiny tsara ny fidirana miaraka.
Azafady azafady  raha mila fanazavana fanampiny momba an'io lohahevitra io.
Status: miasa miaraka amin'ny fetra, backend default ho an'ny rafitra finday
Fomba entina manohana: Voafatotra
Mitaky kinova vaovao kokoa noho ny Qt voalohany.
Mitaky mpamily QtSql fefy mba hamahana ny olan'ny fifanarahana (i Akonadi dia mandefa ny forkan'ny mpamily miaraka amin'ny fanovana ilaina)
Miadana kokoa noho ny MySQL
Mety ho tsara satria maivana kokoa nefa toa tsy mandeha io: /
Izay angona avy amin'ny tranonkala aiza no nakanao azy? Ary eny, ratsy loatra 🙁… tsara raha afaka mampiasa azy toy izany…
Nentiko avy tao amin'ny base teknolojia KDE izy ireo: http://techbase.kde.org/Projects/PIM/Akonadi#Why_not_use_sqlite.3F
Ah mendrika an'arivony misaotra 😀
Miarahaba anao, Kmail dia mahery vaika, hany ka manjavozavo mihitsy aza indraindray ... Izaho manokana ao amin'ny Debian Squeeze dia mbola tsy nahavita nandefa mailaka avy amin'ny kaonty IMAP ankoatry ny default ...
Miala tsiny fa SMTP no tiako holazaina.
Préférences - »Kaonty -» Alefaso 🙂
Hamarino tsara, mampiasa ny KDE 4.7.4 (KMail v1.13.7) aho…
… Tsy tadidiko hoe inona ny fanatsarana / fanovana manana kinova avo kokoa an'ny KMail, ka manantena azy ireo aho 😀
Ny KMail ampiasainao dia tsy mampifandray an'i Akonadi. Tsy maintsy namboarinao avy tao amin'ny KMail ny kaontinao ary avy eo tsy nipoitra tao amin'ny Akonadi console izany, sa tsy izany?
Ny iray amin'ireo fanatsarana ny Kmail 2 (KDEpim 4.6 sy ambony) dia ny fampidirana an'i Akonadi, ary koa ny maro hafa ho hitanao ho anao (Eny, ao Debian dia mbola misy tsy fahampiana an'io xD).
Nampiasaiko hatramin'ny andron'ny KDE 3.X. Tsy afaka milaza aminao aho rehefa nanomboka nampiasa azy io, saingy fantatro fa nanomboka nampiasa azy aho taorian'ny "nandao" Thunderbird 1.X 🙂
Yep, tsy maintsy nampidiriko tanana izy io haha ​​... eny eny, tadidiko fa tao amin'ny KDE 4.8 ny iray amin'ireo fanatsarana dia ny fanatsarana be ny KMail, manokana (araky ny filazanao azy) fa mifangaro (miankina koa) bebe kokoa amin'ny Akonadi .
Manantena ny 5 volana ho avy aho ... hijerena raha miditra amin'ny Debian Testing LOL i KDE 4.8 !!
Ary ahoana ny Arch?
Arch dia nanome olana be loatra tamiko 🙁…. misy ifandraisany amin'ny kernel, fa mihoatra ny ampy.
Manoro hevitra anao aho hitady ny plasmoid an'ny Lion Mail. Fampandrenesana mailaka mifangaro amin'i Akonadi izy io ary noho izany dia tsy ilaina ny fisokafan'ny Kmail foana 🙂
ooo tsy haiko izy, hanara-maso azy foana aho hehehehehe 😀
Adinonao ve ny milaza fa mampiasa IMAP ny Lion Mail.
Mampiasa Akonadi ve ny KMail v1.13.7? Azoko antoka fa ny Kmail2 no mampifangaro azy, saingy tsy afaka milaza aho satria mampiasa kinova kely lany andro an'ny KDE, 4.6.5.
Vao nahita ny hevitr'i Annubis aho, mbola tsy namaky azy io. Izany tokoa no fanatsarana lehibe an'i Kmail2 ary tonga tao amin'ny KDE 4.7 raha tsy diso aho, saingy distros maro no tsy nampiditra azy satria somary tsy matotra izy io.
Tsy mampiasa client mail koa aho, hitako mivantana avy amin'ny tranonkala izy ireo, manana xDDD amin'ny gmail sy hotmail aho. Mampiasa plugin firefox "webmail notifier" aho ary rehefa mahazo izany dia mirehitra fotsiny ilay sary masina 😛
Ary rehefa lavitra ny solosainako aho dia mahatratra ny findaiko ny mailaka 😛
eddojh dia hoy izy:
Nanomboka nampiasa ny KMail 4.8.2 tao amin'ny Slackware aho andro vitsivitsy lasa izay, tena tsara izany ary nanana zavatra niainako mitovy amin'izay nofaritanao tamin'i Thunderbird ianao, programa iray izay tsy misy maharatsy azy fotsiny, saingy kely fotsiny dia lasa mitaky be kokoa isika ary isika maniry ny hampidirina ao anatin'ny KDE sarobidy ny zava-drehetra.
Misaotra an'ireo toro-hevitra, hitako fotsiny ny safidin'ny kisary tao anaty fitoeram-bolan'ny rafitra, nanomboka nitady azy aho noho ny fahafantarako fa nisy izy.
Mamaly an'i eddojh
Misaotra anao nandao ny hevitra 😀
Eny tokoa, tsy i Thunderbird no (heveriko) fa safidy tsara indrindra raha mampiasa KDE ianao, satria tsy mifangaro tsara amin'ny tontolo iainana, raha ny KMail kosa dia natao ho mpanjifa # 1 KDE ... fa zavatra tsy izany? 🙂
dia singam-bolo dia hoy izy:
Nampiasa Kmail efa ho 2 taona aho ary manana ny kaontiko mailaka amin'ny POP3.
Ny marina dia ho ahy no mpitantana mailaka tsara indrindra mety misy. Tsara ny Thunderbird, saingy feno kokoa ny Kmail ary mandany loharano vitsy.
Raha izany, efa nisy nahatsikaritra an'ity lesoka ity tamin'ny kaonty POP3 namboariny? Mitranga izany fa misy mailaka sasany simba ary lasa tsy azo vakiana intsony, miaraka amina litera hafahafa toa ny:
Tsy haiko na noho ny kolikolin'ny Kmail-ko na noho ny fananako mailaka marobe ao anaty boaty.
Mamaly an'i Vello
Mampiasa Kmail aho: efa namboariko .. Fa ahoana no hataoko misokatra ao anaty tontonana ary tsy tokony havelako hisokatra varavarankely foana?
Kmail Prefers »Fisehoana» Tray System »Ampandehano ny kisary System Tray.
Nampiasako ny mailaka Opera izay mandeha tsara, ny olana dia ny hahafantaranao amin'ny Opera 15 esorin'izy ireo amin'ny browser izany, ary izao dia miasa misaraka izy ireo -Ny Linux aza mbola tsy manana ny kinoviny-, ka izaho mitady hahita mpanjifa mailaka hafa. Iza no atoro anao? Mbola atolotra an'izany ve i Kmail? Misaotra anao.
Matetika aho no mamaky ny naotinao ary mahaliana ahy izy ireo, ankehitriny, ny zavatra amin'ny fiainana, niverina aho tamin'io. Google no nitondra ahy satria manandrana mandao an'i Thunderbird miaraka amin'ireo mpanampy an-jatony tapitrisa aho, farafaharatsiny ao an-trano, ary mahita fahasahiranana aho.
Hainao ve ny mamaky ny marika Thunderbird avy amin'ny Kmail? Any am-piasana sy any an-trano dia mampiasa marika mitovy ihany aho, izay midika fa raha manisy marika ny "hamaly" amin'ny tranokala iray aho dia afaka manatona ny iray hafa ary mahita hoe iza amin'ireo no havaliko. Miaraka amin'i Kmail dia tsy haiko ny fidirana amin'ilay fampahalalana izay mazava ho azy fa ao anaty ilay hafatra ihany. Misy hevitra ve?
Jose Javier dia hoy izy:
Io ilay toerana notadiaviko.
Andro vitsy lasa izay dia nanomboka nampiasa kmail aho, OK daholo,
tsara, saika ny zava-drehetra.
Hita fa izao aorian'ny fanatanterahana azy dia misy ny dingana iray izay mandany ny 50% an'ny processeur. Ilay "lehilahy" dia antsoina hoe: akonadi_imap_resource.
Misy manana hevitra hamahana izany ve?
Valiny tamin'i Jose Javier
Niezaka ny Kmail tao amin'ny linux Chakra aho ary ny tena marina dia naharitra ela ny fanokafana ny mailaka tsirairay. Noho izany antony izany dia nesoriko ilay izy ary notohizako ny fampiasana Thunderbird tamin'ny vidin'ny fahaverezana fampifangaroana tanteraka tamin'ny kde.
Amigso sendra manafina ny menio ao anaty kmail aho ary tsy afaka mahita azy intsony, ahoana no hataoko hahazoana azy io. Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, misaotra
Valiny tamin'i Jhoedram
Miguel Carmona dia hoy izy:
Nanintona ny saiko izany:
4. Safidy azo alaina ho an'ny asan'ny vondrona ataon'ny IMAP
Azonao atao ve ny milaza amiko hoe inona izany momba ny asan'ny tarika amin'ny alàlan'ny IMAP?
Valiny tamin'i Miguel Carmona
Ny metaly maimaim-poana